फरक चिकित्सा पद्दतिको समायोजन किन नगर्ने ?- स्वास्थ्य - कान्तिपुर समाचार
भाद्र १२, २०७५ डा. ललित कुमार मिश्र
काठमाडौँ — क्लिनिकमा आउने धेरै जसो बिरामीले सोध्ने गर्दछन् । डाक्टर साब, होमियोप्याथिक औषधिको सेवन गर्दा एलोप्याथी औषधि खान मिल्छ कि मिल्दैन? होमियोप्याथिक र एलोप्याथिक औषधिलाई एकसाथ लिन सकिन्छ? एकसाथ लिनले कुनै प्रकारको हानि त हुदैन?
बिलकुले नोक्सान/हानि हुँदैन, यदि यसलाई समायोजन गर्न सक्यो भने यसबाट बिरामीलाई धेरै लाभ हुन सक्छ । चिकित्सा जगतमा होमियोप्याथी र एलोप्याथी यि दुवै जुम्ल्याहा दिदी बहिनी जस्तै हुन् । रोगीको उपचारका यि दुई भिन्न–भिन्ने चिकित्सा पद्दति हुन् । बास्तवमा भन्ने हो भने यि दुबै एक अर्काका पुरक हुन् । एक अर्काको बिरोधी या प्रतिस्पर्धी होईनन् । केहि रोगहरुको उपचार एलोप्याथीमा प्रभावकारी हुन्छ भने केहि रोगको ऊपचार होमियोप्याथीबाट राम्रोढँगले गर्न सकिन्छ ।
सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक त्यो हो, जसले रोगीलाई उपयुक्त सल्लाह दिन सकोस् । होमियोप्याथी र एलोप्याथी औषधीको प्रयोग एउटा यस्तो संयोजनको रुपमा गर्नुपर्ने हुन्छ । जसबाट सर्वश्रेष्ठ नतिजा आर्जित गर्न सकियोस् । जस्तै, कुनै बिरामी उच्च रक्तचापको समस्या लिएर अस्पताल पुग्छ, जाँचपछि रक्तचाप हुनुको निश्चित कारण पत्ता लाग्दैन । शुरुमा बिरामीलाई आफ्नो खानपिन र जीवन शैलीमा सुधार गर्न सल्लाह दिईन्छ । तथापि उसको रक्तचाप बढ्ने क्रम जारी रहन्छ । अन्ततगत्व बिरामीमा अत्यधिक रक्तचाप देखिन्छ । पुन: अस्पताल पुग्छ र जाँचपछि उसलाई औषधि दिईन्छ । पछिला दिनहरुमा औषधिको डोजपनि बढाउँदै लगिन्छ । यसरी नियमितरुपमा औषधिको सेवन गर्दा पनि बिरामिको प्रेसर कुनै बेला घटबढ हुन थाल्छ । यस पछि बिरामी हतास हुनथाल्छ ।
औषधि खाईरहनुको विकल्प पनि उसले देख्दैन । किनभने उपचार गर्ने ठाउँ भनेको अस्पताल हो । जहाँ उ आईरहेको हुन्छ तर पनि रोग नियन्त्रण हुन सक्दैन । बिरामीले आफ्नो रोगको उपचारबारे जानकारी पाउने अधिकार राख्छ कि राख्दैन भन्ने कुरा देखाउनका लागि यो उदाहरण प्रस्तुत गरिएको हो । एलोप्याथी चिकित्साबाट रोग निको हुन्छ भन्दैमा सधै भरी औषधि खानु पर्ने अवस्था सिर्जना किन भईरहेको छ? कुनैपनी रोगको प्रभावकारी उपचार कुन पद्धतिबाट हुन्छ त्यहि पद्दतिबाट उपचार गराउन पाउने अधिकारबाट बिरामीलाई किन बन्चित गराईन्छ ?
रोगको प्रभावकारी उपचार पाउनको लागि बिरामीले शहरका गल्ली-गल्लीमा किन भौतारिंदै हिड्नु पर्छ । कल्पना गरौं, जिल्ला अस्पतालमा एलोप्याथिक, आयुर्वेदिक, होमियोप्याथिक, नेचुरोप्याथीलगायतका सरकारी मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतिहरु पनि उपलब्ध हुन सक्यो भने बिरामीले उपचारको विकल्पहरु पाउथे । यस्तो भयो भने रोग निर्मुल पार्न सकिन्न भनेकै आधारमा कुनैपनि बिरामीले हतास वा निराश हुनुपर्ने अवस्था रहँदैन । उसले अर्को पद्धतिको चिकित्सक कहाँ गएर आफ्नो रोग बारे छलफल गर्ने मौका पाउछ । सबै जसो अबस्थामा एउटामा नभए अर्को पद्धतिमा निश्चित पनि उपचार संभव हुन्छ । कुनै निश्चित प्रकारको रोगबाहेक अरु सबै प्रकारको रोगमा एउटा पद्धतिले गर्न नसकेको उपचार अर्को पद्धतिले गरेको प्रशस्तै ऊदाहरणहरु छन् ।
यसैले बिश्वका विभिन्न मुलुकहरुमा प्रचलित सबै चिकित्सा पद्दतिहरुलाई एकीकृत रुपमा अगाडि लैजाने र एलोप्याथी चिकित्सालाई मुलधारको चिकित्सा पद्धति मान्दै अन्यलाई पुरक चिकित्सा पद्दतिको रुपमा लिने क्रम बढदो छ । प्रकृतिमा बिभिन्न रोग छन् भने तिनको उपचार पनि पक्कै छन् । केवल रोगको सहि उपचार के हो भन्ने कुरा मात्र थाहा पाउन आवश्यक छ । सबै उपचार पद्धतिमा गुण र दोष छन् तर कुनै निश्चित पद्धतिको गुण र दोषलाई आम रुपमा बिरामी माथि थोपर्न खोजिन्छ भने त्यो अन्याय हो । कुरा नीति निर्माणको हो । सरकारको उदेश्य जनतालाई रोगमुक्त बनाउनु हो । सकेसम्म रोग लाग्नै नदिनु, रोग लागिहालेको अवस्थामा पनि उक्तरोगको सहि उपचार हुने व्यबस्था सिर्जना गर्नु सरकारको दायित्व हो ।
यस पथमा सरकारको नीति निर्माण तह चुकेको देखिन्छ । स्वस्थ्य जीवनयापनसँग गाँसिएका सम्पूर्ण अंगलाई एकीकृत रुपमा अघि बढाउन सक्ने हो भने सरकारको स्रोत साधनको लागतमा नियन्त्रण हुने र सम्पुर्ण नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा दिने अवधारणा पनि प्रभावकारी बन्न सक्ने छ । यसका निमित्त स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट नै कार्य थालनी गर्नु पर्दछ । सबै अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा सबै पद्धतिको पहुच बढाउन सकेमा बिभिन्न शिर्षकमा हुने खर्चमा कमी ल्याउन र जनताको स्वास्थ्य सम्बन्धि अधिकारलाई सहि रुपमा सम्बोधन गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्छ ।
क्यान्सर, एचआईभी, मधुमेह, एलर्जी, मुटरोग, मनोबैज्ञानिक रोग, निम्न प्रतिरोधात्मक क्षमता (अटोईमिनो डिजिज्) ईत्यादि । यस्ता अनेक जटिल एवं असाध्य रोगहरु छन् । जसको सटिक उपचार कुनै एक चिकित्सा पद्दतिबाट संभव छैन । उदाहरणको लागि क्यान्सरको उपचार सर्जरी र केमोथिरापिबाट गर्न सकिन्छ । तर यस पद्धतिबाट उपचार पुर्णरुपले संभव छैन । क्यान्सरबाट हुने दर्दको लागि अतिरिक्त थेरापीको आवश्यकता पर्न सक्छ । जस्तै, होमियोप्याथी । ठिक यसै प्रकार दम जस्तो एलर्जीक स्थितिलाई कोर्टिसोन अथवा ब्राकोंडिलेटर्स, ईनहेलेशनलाई पनि नियन्त्रित गर्न सकिन्छ । जबकि यसको बारम्बार हुने अटेकलाई होमियोप्याथिक औषधिको प्रयोगले कम गर्न सकिन्छ ।
ठिक यस्तै किसिमले सोरियासिस एवं एक्जिमा जस्तो भयानक रोगमा एलोप्याथिकले प्रभावकारी रुपले काम गर्दछ । तर, लामो समयसम्म यस रोगको पुनरावृत्तिलाई होमयोप्याथीद्वारा नियन्त्रित गर्न सकिन्छ । बास्तवमा यसका कयौं अध्य्यनले यसको प्रमाण प्रस्तुत गर्दछन् कि केहि जटिल किसिमको रोगहरुको उपचारमा दुबै प्रकारको औषधिहरुको प्रयोग गरिएको छ । सेन्ट्रल काउन्सिल फर रिसर्च ईन होमियोप्याथी (सी.सी.आर.एच) नयाँ दिल्ली, भारतले गरेको टि.बि.को उपचारको लागि सञ्चालित एउटा रोचक अध्ययनले यो दर्शाउँछ की एम.डि.आर (मल्टिड्रग रेजिस्टेन्ट ट्युबरक्लोसिस) जस्तो कठिन रोगको उपचारमा त्यसबेला राम्रो नतिजा प्राप्त भयो । जव होमियोप्याथी औषधिहरुलाई परम्परागत एलोप्याथिक औषधिको संयोजनका साथ दिईयो, सि.सि.आर.एच नयाँ दिल्लीका निर्देशक डा. आर.के. मनचन्दाका अनुसार राम्रो परिणाम प्राप्त भयो ।
मल्टि ड्रग रेजिस्टेन्ट टियुबरकुलोसिसका १२० जना बिरामीहरुको उपचार गरियो । जस मध्ये केहि रोगिलाई टि.बि.को परम्परागत औषधिले उपचार गरियो भने अर्को समुहलाई एलोप्याथिक औषधिको साथै होमियोप्याथिक औषधिको पनि सहयोग लिईयो । यसमा के देखियो भने जस-जसले होमियोप्याथीक औषधिहरुको पनि सेवन गरे उनीहरुलाई एलोप्याथिक औषधिकोमात्र सेबन गरेकाहरुमा भन्दा राम्रो परिणाम आयो । यो होमियोप्याथिक र एलोप्याथीबीचको समन्वयको एक सान्दार उदाहरण हो । दम, माईग्रेन, रिमोटायड अर्थराईटिस, एकंलोजिंग स्पोन्डालाइटिस्, न्युरेलजिया, अस्टियोअर्थराईटिस्, डायबेटिक न्युरोयकतापैथी, एगंजाईटी न्युरोसिस, एक्जिमा, टान्सिलाईटिस ईत्यादी पुनरावृतिजनक एवं असाध्यरोग छन् । यसका लागि दुबै चिकित्सा पद्धतिको समायोजनको आवश्यकता पर्दछ । केहि ब्यक्तिहरु र यहाँसम्म कि दुबै चिकित्सा पद्धतिका चिकित्सकहरु यो मान्दछन् कि विभिन्न पद्धतिहरुको औषधिहरुको समायोजन संभव छैन । यो एउटा भ्रम मात्र हो । उदाहरणको लागि हाम्रो मित्र राष्ट्र भारतमा भएको अस्पताल सर गंगाराम तथा अन्य प्राईभेट अस्पतालहरुमा पनि छुटै होमियोप्याथिकको युनिट सञ्चालनमा छन् । यस्तै नेपाल सरकारले पनि यसप्रति चासो दिंदै नयाँ नियम कानुन ल्याउने हो कि ?
Mishradr.lk@gmail.com प्रकाशित : भाद्र १२, २०७५ १३:५३
श्रावण २५, २०७५ डा. ललित कुमार मिश्र
काठमाडौँ — धेरै जसो केटा-केटीहरुको पेटमा जुका पाईन्छ । तर कहिलेकहिं बयस्क मानिस पनि जुकाबाट पीडित भएका हुन्छन् । जुका जो कोहिलाई पनि हुन सक्छ । जुकाका प्रकार पनि धेरै हुन्छन् । जस्तै, राउन्ड वर्मस, थ्रेडवर्मस, टेपवर्मस, पिनवर्मस, हुकवर्मस, जिआर्डिया आदि जुकाका प्रकार हून् ।
यो रोग लागेमा बिरामीले खाएको खाने कुराको पोषक तत्व जुकाले खाईदिन्छ । व्यक्तिको शरीरमा लाग्दैन र पीडित व्यक्ति जति खाएपनि दुब्लो-पातलो र कमजोर देखिन्छ । लामो समयसम्म यो रोगको उपचार नगरे रोगीलाई एनिमिया, कुपोषण, एलर्जि तथा छारेरोग लाग्ने संभावना बढि हुन्छ ।
जुँका पर्नुका कारणहरु : जुकाहरु सानो आन्द्रामा बस्छन् । फर्टिलाईजेशन (गर्भाधान) गरेपछि पोथीजुकाले लाखौंको संख्यामा फुल पार्छे । जुन फुल मानिसको दिशाबाट बाहिर निस्कन्छन् । अनुकुल वातावरणमा यि फुलहरु रोगजन्य हुन्छन् । यि फुलहरु दुईदेखि तीन सप्ताहमा सक्रिय लार्भा हुन्छन् । मानिसले जुकाको फुल खाएपछि संक्रमण सुरु हुन्छ । जुका पेटभित्र पर्ने होइन, खाएपछि मात्र बाहिरबाट पेटमा पर्ने हो । जुकाका फुलहरु सानो आन्द्रामा विकशित हुन्छन् र गतिशिल लार्भा बन्दछन् । सानो आन्द्राको भित्तालाई छेडेर रगतको नलीमा पस्छन् र दाहिने पट्टी मुटुमा पुग्छन् । त्यसपछि पुन: फोक्सोबाट घाँटीमा आइपुग्छन् । त्यसपछि अन्न नली हुँदै आमाशयमार्फत पुन: सानो आन्द्रामा पुग्छन् । यसप्रकार जुकाको जीवन चक्र चलिरहन्छ ।
कारण: जुका पर्नुको प्रमुख कारणमा नङ् टोक्ने बानी, हात नधोईकन खाने कुरा खानु, भुइमा झरेको खाने कुरा टिपेर खानु, काँचै खाने कुरा सलाद नपखाली खानु । नाक कोट्याउँदै औला मुखमा हाल्नु । माटो खानु । राम्ररी नपाकेको मासु खानु, धेरै गुलियो चिज खानु आदि पर्दछन् ।
लक्षण;- पेट दुख्नु, पखाला लाग्नु, अपच हुनु, वाक–वाक लाग्नु र बान्ता हुनु, ज्वरो आउनु, टाउको दुख्नु, खोकी लाग्ने, वजन घट्नु, रोगी दुब्लोपातलो हुनु, अनुहार पहेलो देखिनु, बारम्बार नाकमा औला हाल्नु, मलद्वार चिलाउनु, आँखाको वरिपरि कालो घेरा पर्नु, धेरै भोक लाग्नु, पेट ठुलो हुनु र कडा हुनु, निन्द्रामा दाँत किटकिटाउनु, निन्द्रा मै औछ्यानमा पिशाब गर्नु, पिशाव सेतो भएर जम्नु, निन्द्रामा बेचैनी हुनु, जिउ भारी हुनु, हात खुट्टा चिसो बनिरहनु, चिडचिडापन आउनु, जिद्दिपना हुनु, सा-सानो कुरामा रुनु/कराउनु, जे गर्दा पनि उसको चित नबुझ्नु ।
रोकथाम : धेरैजसो बालबालिकाहरु फोहर तथा दुषित माटोमा खेल्दा उनीहरुको हातमा जुकाको फुल टाँसिन्छ र पछि मुखमा औंला हाल्दा जुका सर्ने हुनाले घरमा केटाकेटीहरुलाई सफा सुग्घर गर्ने बानी बसाल्नु पर्छ । खाना खानु अगाडि साबुन पानीले हात राम्ररी धुने । भुईमा झरेको खाना नखाने । हातको नङ काट्ने ताकि फोहर जम्मा नहोस् । जहाँ पायो त्यही दिशापिशाब नगर्ने । खाने पानी उमालेर वा फिल्टर गरेर मात्र खाने । भान्छा कोठाको सफाइमा ध्यान दिने । झिंगाबाट खाद्य तथा पेय पदार्थ बचाउने । परिवारमा कसैलाई जुका परेमा सबैलाई उपचार गराउने । बच्चाको मुखमा औला हाल्ने बानी छुटाउने । पेट सफा राख्ने कब्जियत हुन नदिने । जुका हेर्दा सामान्य भएतापनि कहिलेकाहि यसले नराम्रो परिणाम देखाउने रोग भएको हुनाले सबै जना सजग भइ व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिएर समय–समयमा दिसाको परीक्षण गराई उपचार गरेमा जुकाबाट बच्न सकिन्छ । यो समस्यामा खानपिनमा सुधार गर्दै सरसफाइमा ध्यान पुर्‍याई उपचार गर्न सकिन्छ ।
के खाने : स्वच्छ सफा पौष्टिक खान खाने । तरकारी र फलमा करेला, परवल, लौका, काँचो मेवाको सब्जी, बेथुको साग, पुदिना, प्याज, गोलभेंडा, गाँजर, अमला, स्याउ, पाकेको अम्बा , आलुबखेडा, केरा, भुईकटहर, काँचो नरिबल र नरिवलको पानी खाने ।
के नखाने : तारेको, भुटेको, बासिखाना, बेसनबाट बनेको खानेकुरा नखाने । मिठाई, चकलेट, चिनी नखाँदा राम्रो ।
उपचार : होमियोप्याथीमा रोगीको मानसिक एवं शारीरिक लक्षणहरुलाई मध्यनजर राखेर रोगको अवस्था, जुकाको प्रकारसमेतलाई हेरि यस समस्याको लागि प्रयोग गरिने केहि औषधिहरु निम्न लिखित छन । औषधिहरु, सिना, चेलिडोनियम आयल, फिलिक्स मास, सेन्टो नाइन, कुप्रम अक्सिडेटम, नेट्रम फोस, केलिम्युर, टियुक्रियम, कुकरबिटा पेपो, चिलोन-क्यू, स्पाइजेलिया, कल्केरिया कार्ब, सलफर, एब्रोटेनम, टेरिबिन्थ, टेल्युरियम, केलेडियम आदि ।
प्रकाशित : श्रावण २५, २०७५ १५:३४
झन् गम्भीर बन्दै छ रुघाखोकी
औषधि र स्वास्थ्य प्रदर्शनी हुने
गंगालालमा मुटुको मुख्य धमनीको जटिल शल्यक्रिया
चिसो कट्टुले मृगौलाको पत्थरी
नजिक प्रस्टै, टाढा धमिलो